Top 4 Software la Sameeyo HTC nidaameed la Mac
Waxaynu wada ognahay in HTC doortay Android sida nidaamka qalliinka ee casriga ah ee ay laakiin Mac si adag isku dhafan si macruufka, nidaamka qalliinka in loo isticmaalay in Apple ee iPhone. Xiriirka HTC daaqadaha waa wax fudud oo si sahlan - furaysto kaliya cable USB ah iyo play galay. Isku Laakiin waa yara adag tahay Mac sababta oo ah arrin darawalka.
Si kastaba ha ahaatee, mararka qaar waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan phone HTC la Mac. Kaliya aan jawaab su'aalaha soo socda labada su'aalood. Maxaad samayn doontaa marka aad bedesho telefoonka ama bartey badiyay telefoonka gacanta? Ama marka aad la casriyeeyay version Android? Xaaladaha kuwa waa in aad u hagaagsan aad HTC la Mac. Haddii kale, waxaa laga yaabaa in aad lumiso xog muhiim ah aad. Sida ma jirto si kale oo aad si toos ah u xirmaan kartaa telefoonka HTC la Mac, waa in aad qaadato gargaar ka mid ah qalab qolo saddexaad ee aan sidaa yeelno. In this article, waxaan kala hadli doonaa afar qalab dhinac saddexaad oo ah in aad isticmaali karto si aad u hagaagsan HTC la Mac.
Qaybta 1. Waa maxay Manager HTC nidaameed u Mac
Qaybta 2. nidaameed HTC on Mac Maamulaha HTC nidaameed
Qaybta 3. Dhibaatooyinka Manager nidaameed HTC u Mac
Qaybta 4. Top 3 Alternative Maamulaha HTC nidaameed u Mac si hagaagsan HTC la Mac
Tababare nidaameed HTC u Mac waa codsi ah oo lacag la'aan ah, ee ay soo HTC in u sahashay in ay u hagaagsan warbaahinta oo dhan si ay oo ka your computer la telefoonka HTC. Iyadoo tababaraha HTC nidaameed kale oo aad u hagaagsan kartaa oo dhan xiriirada, dhacdooyinka taariikheed, Bookmarks iyo waraaqaha sidoo kale. Wax walba waa ammaan ah oo taageeray oo diyaar u ah in la cusboonaysiiyaa si aad telefoon.
Muuqaaladan ee Manager HTC nidaameed ku qoran yihiin hoos:
1.View iyo maarayn warbaahinta telefoonka HTC ka computer
Browse iyo maarayn music, sawiro iyo videos on telefoonka iyo sidoo kale on your computer.
Import Lugood playlists ka your computer Maamulaha HTC nidaameed.
Play music, videos adigoo isticmaalaya ciyaaryahanka dhisay-in warbaahinta.
Bedelka iPhone photos, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, iyo ka badan si aad telefoon HTC.
Dajiyaan oo dhan music, sawiro iyo videos ka phone HTC si aad u computer
Documents Import ka your computer si aad telefoon
Copy music soo xulay, videos, iyo sawiro ka your computer si aad telefoon
3.Backup iyo soo celiyo
Kaabta telefoonka aad HTC si aad u computer si aad si fudud celin kartaa gurmad si phone isku mid ah ama telefoon kale HTC.
4.Sync playlist iyo xogta
Playlists music nidaameed iyo macluumaadka sida xiriirada iyo taariikheed ee u dhexeeya aad telefoon iyo your computer.
Mac computer la processor Intel ah
RAM - 512MB ama sare (talinayaa)
1024x768 ama wax ka sareeya-xallinta video adabtarada iyo monitor
100MB meel disk adag oo lacag la'aan ah
USB 2.0 ama ka badan
Mac OS X 10.6 ama version ka dib
Talaabada 1: Download iyo rakibi Manager HTC nidaameed u Mac
Download ku Manager HTC nidaameed rakibayo goobta xarunta taageero HTC. Burcad rakibayo ah oo raaca fudud ee edbinta shaashadda.
Talaabada 2: Orod Manager HTC nidaameed iyo xirmaan HTC la computer
Ka dib markii la rakibey, xirmaan telefoonka HTC in aad Mac la cable USB bixisey. Tababare nidaameed HTC u Mac si toos ah u furan doono. Haddii Manager nidaameed HTC u Mac ma bilaabi si toos ah, waxa ay gacanta kusoo bilowdo. Marka Manager HTC nidaameed ayaa ku bilowday, waxa ay bilaabaysaa inay syncing si toos ah.
Dooro tab Home si aad u eegto Device ah HTC xiran. Waxaad ka arki kartaa hantida qalabka sida HTC nooca qalab, taariikhda u hagaagsan, Android version, version Dareenka HTC, iyo tirada software ah.
Talaabada 3: nidaameed Photos
Riix tab Gallery ah. Hadda waxaad isticmaali kartaa fayl labada of your computer iyo telefoonka HTC. Riix fallaadhiina waxay ka si ay u baahiso ama burburto
Si aad file diri file ka computer si aad telefoon keliya heli file in album ah oo guji icon phone HTC file hoose.
Si ka phone HTC diri file a in ay computer ka heli image in, waxay xaq u-riix dooro Copy in Computer ka dibna dooro album ah ee hadda jira ama la abuuro album cusub u soo dirto image in si.
Talaabada 4: nidaameed Music
Riix tab Music iyo dooro Settings Music bidixda. Riix Display ay ku darto file music ka fayl aad kombuutarka in aad telefoon.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa Maamulaha nidaameed si toos ah u soo dhoofsadaan files ka Lugood ama Windows Media Player Maamulaha HTC nidaameed.
Q1. Ma ordi karaan Manager HTC nidaameed rakibayo on MAC
Jawaab: Tag rabtid System aad ka dibna dooran "amaanka & gaarka ah" meesha ugu hooseysa. Waxaa jiri doona fursad ay dooran ilo in your computer-ada u oggolaan doonaa in lagu xiro ka. Waxaad xaq u leedahay in hadda "dukaanka App iyo horumarinta aqoonsaday" la doorto ka heli karo. Hadda bedeli goobaha ay "Dhamaan ilaha".
Q2. Ma Radidiyaha karaa video files ee HTC nidaameed qabaal
Jawaab: Maareeyaha HTC nidaameed ciyaari kara video files leh qaabab: 3GP, 3G2, wmv, iyo MP4 (video codec: H.264). Waxaad u baahan tahay si loo soo dajiyo codec habboon on your computer u ciyaaro oo dhan video codes iyo qaabab on Manager HTC nidaameed.
Q3. Ma ku xidhi karaa telefoonka si computer
Fadlan hubi kuwa soo socda:
Hubi cimilada USB waxaa u suurta ama aan.
Unlock screen aad telefoonka ee haddii la qufulay.
Download nooca ugu dambeeya oo ka mid ah wadayaasha qalab cusub.
Taageerayaan MAC OS X
1. Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) $39.95 MAC OS X 10.6, 10.7, 10.8, iyo 10.9
2. Transfer File Android Free MAC OS X 10.5 ama ka dib
3. SyncMate Personal - $39.95
Qoyska - $59.95
Business - $ 99.95
Unlimited - $199.95 MAC OS X 10.8 ama ka dib
1.Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)
Wondershare MobileGo u Android Pro (Mac) syncs telefoonka HTC in aad X. Mac OS gurmad wax walba oo ku saabsan telefoonka HTC iyadoo la isticmaalayo qalab aan ka kaaftoomi kasta oo aad awoodo. Waxa kale oo aad soo celin kartaa ama soo xulay oo dhan xoojiyaa files leh click hal. Waxay noqon kartaa barnaamijka weyn dunida ka music iyo video. Iyada oo barnaamijkan, waxaad si toos ah music ka Lugood wareejin karaan in ay telefoonada Android ama ka telefoonada HTC maktabadda Lugood dhoofin. Waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa, rakibi, uninstall iyo gurmad aad app ee yaalla. Waxa kale oo aad ka diri kartaa oo jawaabin fariimaha qoraalka ah oo iyaga gurmad sida file .txt.
Waxaad xiriirada gurmad, SMS, Calendar, abuse Call, iyo barnaamijyadooda ka phone HTC kartaan. Waxa kale oo aad soo celin kartaa xogta ku taageeray-up oo la soo doortay oo dhan ama in click hal.
Si toos ah music ka Lugood wareejiyo phone Android, ama u dhoofin ka phone in Lugood.
Ka PC soo dir fariin qoraal group.
Dib fariimaha oo dhan text ama dunta muhiim doortay file a .txt on your computer.
Ku rakib iyo uninstall barnaamijyadooda jecel on PC.
Import iyo dhoofinta music, videos, iyo sawiro iyo ka aad telefoon HTC.
Transfer File 2.Android
Transfer File Android waa barnaamij loogu talagalay X. Mac OS Waxaa dajisay Google, si aad ku kalsoonaan kartaa software this. Waxaa dalka buuraha leh kartaa telefoonka HTC sida disk adag dibadda marka xiran aad Mac. Waxaad u isticmaali kartaa si aad u eegto iyo wareejiyo files dhaxeeya Mac iyo telefoonka HTC ah. Xiriirka telefoonka aad Android in aad Mac waa mid fudud. Just xiro qalabka HTC la cable USB Timid telefoonka HTC iyo bilowdo Author telefoonka sida an USB disk adag.
Phone Buur Android sida an disk adag dibadda.
Bedelka files ilaa 4GB mar ama ka soo Mac.
Rakibaadda Easy iyo howlgalka.
Isticmaalo Protocol Transfer Media (MTP) Buur qalab Android Mac OS X.
SyncMate u Mac kuu ogolaanaya in aad si fudud ku gadanina files dhaxeeya Mac iyo aaladaha kale sida computer kale, qalabka la qaadi karo, Qalabka telefoonada gacanta, iyo xisaab-online sida xisaabaadka Google, WordPress iyo iCloud. SyncMate malaha waa xalka kaliya ee ogolaatay syncing Mac qalabka duwan oo isku mar. Sidaas, uma baahnid in aad si aad u iibsato dhowr xal syncing si hagaagsan aad Mac la phone HTC. Waxaa jira laba nooc heli karo - version lacag la'aan ah iyo khabiir version. Version ayaa lacag la'aan ah u hagaagsan doonaa macluumaadka ugu muhiimsan - xiriirada iyo jadwalka. Version khubarada badan oo dheeraad ah ku samayn karin.
Hagaagsan aad Mac qalabka duwan oo isku mar - qalabka Android, nooc kasta oo qalabka macruufka, Macs kale, qalabka MTP kasta, iyo Jaha kaydinta.
Hagaagsan oo xisaab-online - xogta hagaagsan oo iCloud kaydinta, account Google ama DropBox.
Doorasho badan u hagaagsan - Kalandarada, Xusuusin, Xiriirada, Safari Bookmarks, Lugood, iPhoto.
Hayso xogta ku saabsan qalabka aad cusub la Autosync.
Taageerada OS X Mavericks.
Hagaagsan Background, si uu furmo suuqa app dhibin doonaa.
Isbarbar of 4 software sida ay sifooyinka muhiimka ah
Taageerada Auto nidaameed
Hagaagsan oo Nooca Device Multiple
Hagaagsan oo Online Account
Buur Phone Like External Hard Disk
U dir SMS
Nidaameed la Lugood
Tababare nidaameed HTC u Mac Haa No No No No Haa Haa
Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) Haa Haa Haa No Haa Haa Haa
Transfer File Android No Haa No Haa No No No
SyncMate Haa Haa Haa No No No Haa
Kaabta iyo Soo Celinta Android Phone
Messages kaabta ka Android inay Computer
Xiriirada kaabta ka Android Phone
Photos kaabta ka Android Phone
Data kaabta ka Android inay PC
Nuqul Xogta laga BlackBerry in Android
Ka Samsung Bedelka Content si iPhone
Dhaqaaq Xiriirada in a New Android Phone
Content Nuqul ka iPhone in Samsung
Xogta laga Nokia wareejiyo Android
Best 3 Android Emulator u Mac si Orod Your Raadinayo Android Apps
Kid PIX Deluxe 3D ah ee Mac
Tenon Intersystems: iTools (OS X) ee Mac
Mp3tag u Mac: Sidee Waxaad Edit karaa Information for Music on Mac
Download ee Best Flip4Mac Alternative Mountain Libaaxa
Best Mac in Transfer iPhone si ay u gudbiyaan File si iPhone
Sidee inuu ka soo kabsado Faylal ay ka USB Flash Drive ee Mac
> Resource > Mac > Top 4 Software la Sameeyo HTC nidaameed la Mac